चीनबाट ल्याएको पीपीई : गाउन छ, चश्मा र टोपी छैन ! – Sudarshan Khabar
चीनबाट ल्याएको पीपीई : गाउन छ, चश्मा र टोपी छैन !
१९ चैत, पोखरा । सरकारले चीनबाट ल्याएको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) सेट नाम मात्रको भएको पाइएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि चाहिने पीपीईसहितका स्वास्थ्य उपकरणहरु ल्याउने जिम्मा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिएको थियो ।
महंगो मूल्यमा किनेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सम्झौताअनुसार सामान नआएको भनेर सम्झौता रद्द गरेको छ ।
तर आइतबार पहिलो लटमा आएका सामानमध्ये पीपीईमा पुरा सेट नै नभएको पाइएको छ ।
चीनबाट आएका पीपीईमध्ये सरकारले हरेक प्रदेशलाई करिव एक हजार थानका दरले बाँँडेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका लागि छुट्याएका सामानहरु मंगलबार हेलिकप्टरले पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रागणमा खसाल्यो । ३७ हजार माग गरेको प्रदेश सरकारलाई एक हजार पीपीई थोरै हो । तर जति आएको छ, त्यसलाई जिल्ला जिल्लामा पठाएर काम चलाउने निर्णय भयो ।
तर जब पीपीई बक्स खोलेर हेरे, अधिकारीहरु छक्क परे ।
पीपीई त गाउन मात्रै छ भने अरु सामान पनि अधुरो भएकाले कामै नलाग्ने भयो । ‘पीपीईमा गडबड पो भएछ,’ प्रदेश स्वास्थ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक खिमबहादुर खड्काले अनलाइनखबर भन्छन्, ‘एक हजार थान पीपीई आयो भनेर खोलेर हेर्दा त गाउनमात्रै रहेछ । यो अपुरो र अधुरो भयो ।’
स्वास्थकर्मीले लगाउने पीपीई सेटमा टोपी, चस्मा, बुट वा बुट कभर नै नभएको उनले बताए । ‘पीपीई भनेको गाउनमात्रै होइन । गाउन मात्रै त प्रयोग गर्नै मिल्दैन,’ आपूर्ति निर्देशक खड्काले भने, ‘हामीले बुधबार नै जिल्ला जिल्लामा पीपीई पठाउने भनेका थियौं । अपुरो आएपछि पठाउन सकिएन ।’
संघीय सरकारले २० हजार थान मास्क, २० हजार थान पञ्जा, ४ सय थान एन–९५ मास्क, १० थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र एक सेट पीसीआर मेसिन पठाएको बताएको थियो । तर एन–९५ मास्क पनि ४ सय थानमात्र आएको छ ।
किट दिए त्रिवि ल्याबबाट पनि कोरोना परीक्षण, चार घण्टामै नतिजा